Kuqashwe abahlengikazi akade bebhuquza emakhaya | News24
Kuqashwe abahlengikazi akade bebhuquza emakhaya
ISITHOMBE : sithunyelweAbahlengikazi kanye nongqongqoshe wezeMpilo eGreys Hospital ngoLwesine olwedlule.
UNGQONGQSHE wezeMpilo esifundazweni saKwaZulu-Natal uDkt Sbongiseni Dhlomo uthi unethemba lokuthi ukuqashwa kwamanesi angama-300 esifundazweni sonke kuzowenza umehluko emitholampilo kanye nasezibhedlela zikahulumeni .
UDhlomo ukusho loku ngoLwesine olwedlule mhla zili-10 kuMasingana (January) esibhedlela i-Greys nalapho kade ehlangene khona nalaba bahlekingakazi.
Kulaba bahlengikazi kubalwa khona o-staff nurse kanye nama-nursing assistants.
Ekhuluma nabezindaba uDhlomo uthe nakuba ukuqashwa kwalabahlengikazi ukungeke kukukuvale ngci ukushoda kwabahlengikazi bengumnyango bayathemba ukuthi ukhona umehluko ozokwenzeka. Lolu hlelo lokuqashwa kwalaba bahlengikazi olwaziwa ngokuthi iPresidential Stimulant package lwamenyezelwa uMongameli wezwe uMnu Cyril Ramaphosa kanti kuhloswe ngalo ukuphakamisa izinga lezempilo ezikhungweni zikahulumeni ngokuthi kwa khiwe amathuba emisebenzi elinganiselwa kweyizi-5300 ezweni lonke.
“Lena inamba enkulu yabantu abaqashiwe kanti loko kusho ukuthi kunemindeni engama-300 eseyizothola ukuthi izimpilo zabo zishintshe. Nakuba kungeke kuvaleke ukushoda kwabasebenzi kodwa sinethemba lokuthi ukuqashwa kwalaba bahlengikazi kuzo khumbuza izinga lezempilo ezikhungweni zethu. Besingakujabulela ukuthi uMongameli abe na thi ngalolu suku azobona izithelo zezithuthuku zakhe . Namahlanje kunemindeni engama-300 eseyithole abantu abazokwazi ukuthi babeke isinkwa etafuleni.
“Lapha kunabahlengikazi abesebechithe iminyaka engaphezu kweshumi beheleli ekhaya bengasebenzi sebeze baphenduka ngisho inhlekisa emphakathi abahlala kuyo. Laba bahlengiikazi abaqashwe lapha babaluleke bayisitebhiso sokuqala emkhakheni wezobuhlengikazi kodwa babaluleke kakhulu kubantu bethu,” kubeka yena .
UDhlomo uphinde waveza ukuthi isifundazwe sizophinde simemezele ukuqashwa kwabanye abasebenzi abahlukene abangaphezu kwama-300 abaqashwe ngaphansi kwalo futhi lolu hlelo.